होटेलमै चल्यो मन्त्रालय : कमिसनका लागि मन्त्री र कर्मचारीको 'सेटिङ' ! - Maxon Khabar
Home / News / होटेलमै चल्यो मन्त्रालय : कमिसनका लागि मन्त्री र कर्मचारीको 'सेटिङ' !
होटेलमै चल्यो मन्त्रालय : कमिसनका लागि मन्त्री र कर्मचारीको 'सेटिङ' !
धनुषा असार ३१
संघीय नेपालको प्रदेश नं २ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी असार मसान्तको अन्तिममा कामको भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा कमिसन लिन असहजता हुने भएपछी कमिसनका लागि होटेलमा बसेर योजनाको बनाईरहेको रहस्य खुलेको छ ।
केही दिन देखी कर्मचारीहरु जनकपुरको विभिन्न होटेलमा मूल्यांकनको काम गरिरहेको खुलासा भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको छ । उपभोक्ता समितिहरुलाई काम गरेबा पतको दिनुपर्ने भुक्तानी कमिसन लिएर कर्मचारीहरुले होटेलबाटै गरेको पाइएको हो ।
होटेलमै कमिसनको सेटिङमा मन्त्रालयको काम भइरहेको थाहा पाएपछि पत्रकारहरुको टोली उनीहरुलाई पछ्याएका थिए । पत्रकारले पछ्याएपछि भागेर वन निर्देशनालयमा पुगेका कर्मचारीहरु भने होटेलमै देखिएका थिए । त्यहाँ राजपा नेपालकी प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारीसमेत पुग्नु भएको थियो ।
मन्त्रालयमा ठाउँ अभावको कारण होटेलमा आएर काम गर्ने गरेको एक कर्मचारीले बताएका थिए ।
पत्रकार आएको थाहा पाएपछी कर्मचारी, काम गराउन पुगेका प्रदेश सांसद तथा उपभोक्ता समतिका पदाधिकारीहरु पालैपालो निस्केर मन्त्रालयतर्फ भागेका थिए ।
सोमरबार सिटी स्टार होटेलको कोठा नम्बर २०५ र २०८ मा मन्त्रालयका फाइल, प्रिन्टर, ल्यापटप लगेर कर्मचारीहरु काममा व्यस्त देखिन्थे । काम गराउन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु पनि फाइल र कमिसन बोकेरै होटेल गएका थिए । स्रोतका अनुसार राजपाका उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय यादवको सेटिङमा कर्मचारीहरुले कमिसन/ मोटो रकम असुल्न होटेल होटेल पुगेका थिए ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव जगदीश गुप्ताले आफ्ना कर्मचारी होटेलमा गएर कमिसन लिएर काम गरेको कुरा अस्वीकार गर्नुभयो । गुप्ताले भन्नुभयो ‘ होटेलमा गएर काम गरेको कुरा साँचो होइन , अर्को ठाउँमा पनि हामीले घर भाडामा लिएर इन्जिनियरलाई काम गर्न कार्यालय सञ्चालन गरेका छौँ ।
फाइल सदर गरेबापत १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन कर्मचारीहरुले लिने गरेको र त्यसबाट मन्त्री यादवले समेत कमिसनको भागबण्डा पाउने गरेको स्रोतको दाबी छ । आजको उज्यालो 90 मा खबर छ